Wenger Oo Rumaystay War Been Ah Hambalyana u diray George Weah
HomeAfricaWenger Oo Rumaystay War Been Ah Hambalyana u diray George Weah
Tabobaraha naadiga Arsenal – Arsene Wenger ayaa la hoos dhigay oo rumaystay war been ah oo lagu baahiyey in xidigii kubadda cagta ee George Weah uu ku guuleystay doorashadii Liberia ee Madaxweynenimada, iyadoo aan xataa ilaa hadda natiijadii kama dambeysta ahayd ee cod bixin si rasmi ah shaaca looga qaadin.
Mr Wenger ayaa yidhi: “Waxaan jeclahay inaan ku hambalyeeyo mid kamid ah ciyaaryahanadaydii hore, oo noqday madaxweynaha wadanka Liberia.”
Wenger, wuxuu Weah ku soo maamulay kuna soo carbiyey wakhtigii uu joogay naadiga Faransiiska ah ee Monaco badhtamihii Sagaashaanaadkii.
Mr Weah ayaa kamid ahaa 20 murashax oo u tartamayay jagada madaxweynenimada, doorashadii Salaasadii dalkaas ka dhacday.
Ciyaaryahankan hore u noqday laacibka kaliya ee Afrika u dhashay ee ku guulaystay ‘Abaal marinta xiddiga aduunka ee sanadka” ayaa ku guuldaraystay labadii door ee uu hore tartanka ugu galay jagada madaxweynenimada, laakiin ta imika kamid ah, raga ugu cad cad ee la filayo ama la saadaalinayo inay xilka kala wareegi doonaan – haweenayda wakhti xaadirkan jagadaas haysa ee Ellen Johnson Sirleaf.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan saadaaliyeyaashu waxay rajaynayaan in doorashadu wareeg labaad u gudbi doonto, maadaama murashaxa guulaysanaya laga rabo inuu helo in ka badan 50% codadka la dhiibtay si uu ugu guuleysto.
Cristiano Ronaldo Oo Bernabeu Kusoo Bandhigay Abaal-marinnada Ballon d’Or Oo Afar Ah